Igbe igbe aha nkeonwe ahaziri ahaziri iche 3D lashes 100% ezigbo mink nku anya ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na -emepụta | Weiti
Igbe igbe aha nkeonwe ahaziri iche 3D lashes 100% ezigbo ndị na -ere nku anya mink
1, ụdị AILSA 18mm mink fur lashes
2, Anya dị nro, dị nro, nku anya 3d eke
3, Akara ahaziri nkeonwe dị
4, 100% ntutu isi mink dị oke mma nke ejiri aka mee
OEM & ODM EYELASHES Ụgha
Akara ngosi onwe onye
Ọnụ ahịa asọmpi n'ahịa
Ọgaranya nku anya ahụmahụ ahụmahụ
Ahaziri nkeonwe ahaziri iche
200000 ụzọ abụọ kwa ọnwa
SGS, OA, ISO9001
Nku anya ụgha anyị niile bụ nke ejiri ntutu mink na-enwu enwu, nke dị nro ma na-efe efe dị ka nku anya gị. Enwere ike ijigharị nku anya ụgha ejiri aka mee nke ọma. N'iji teknụzụ ntutu anya simulated, nku anya nwere ike ịdị ka eke na nro dị ka ezigbo nku anya, na -enye gị ohere ịpụ iche mgbe niile.
Ụdị ire ọkụ dị iche iche dị, ọ na-akwadokwa ịhazi ụdị ndị ahịa chọrọ. Ndị ahịa kwesịrị inye anyị ụfọdụ ihe achọrọ na paramita ma ọ bụ nlele anụ ahụ.
Akụrụ anya ụgha ahọpụtara, mgbe ọtụtụ afọ nke nchịkọta ahụmịhe, anyị enwela ndị na-eweta akụrụngwa dị mma, na-arụ ọrụ nke ọma, ogologo oge na-enye anyị ezigbo akụrụngwa.
Ejiri aka mee 100%. Tụnyere nke nrụpụta igwe, ihe ejiri aka mee nwere ike hụ na nku anya ụgha agaghị emebi, anyị na -ejikwa gluu aka iji hụ na nku anya ya agaghị ada.
Enwere ike ịhazi ụdị nkwakọ ntutu ụgha dị iche iche. Maka nhazi aha njirimara, nkwakọ ngwaahịa dị njikere na -akwado ibipụta UV 3d. Igbe a haziri ahazi na -akwado ibipụta UV na mbipụta stamping ọkụ.
Nnyefe Na Oge
Maka lashes dị njikere, oge nnyefe dị n'ime awa 48, maka lashes ahaziri, oge nnyefe dị n'ime ụbọchị 7-25.
A ga -elekọta ajụjụ onye ahịa na nke mbụ. Maka ajụjụ ngwa ngwa, biko gwa anyị okwu site na oku ekwentị ma ọ bụ ozi ozugbo.
Nkwa dị mma
Maka nsogbu ọ bụla dị mma ma ọ bụ mebiri emebi site na njem, ị nwere ike ịrịọ maka nkwụghachi ma ọ bụ iwe ngwaahịa n'ime ụbọchị ọrụ 3.
Gini mere eji apịa ihe ugha?
Nku anya ụgha nwere ike ime ka anya yie ihe buru ibu ma maa mma, ogo ịgbagọ nwekwara ike dakwasị nku anya, nke ga -adị mma karịa.
Anya nku anya ụgha dị n'Ijipt na Rom oge ochie. A na -ele anya anya anya dị ka ihe nnọchianya kachasị mma. Ka oge na -aga, mgbe amuchara nku anya ụgha, ọtụtụ mmadụ na -achụkwa nku anya. Na 1916, onye ntụzi ihe nkiri jiri ezigbo ntutu mee nku anya ụgha maka mkpa ihe nkiri na ihe onyonyo. Ka oge na -aga, ihe atụ nke ndị Britain wepụrụ iyi nku anya ụgha, ọtụtụ ndị mmadụ marakwa ịdị adị nke nku anya ụgha.
N'ọgwụgwụ nke nku anya ụgha, enwere ụdị karịa, ụdị na agba dị iche iche, na oge dị iche iche. Mana n'agbanyeghị ụdị nku anya ụgha, ha nwere ike ime ka anya "kwuo" mgbe etinyere ya, anya mara mma zuru ezu iji kpughee ya. Ka oge na -aga, ọtụtụ mmadụ enweghị afọ ojuju n'itinye nku anya ụgha ma chọọ ka ha too n'ihu ha ruo mgbe ebighị ebi, a mụrụ usoro ịgbatị ntutu anya.
N'ozuzu, nku anya ụgha mbụ bụ naanị iji gosi amara ụmụ nwanyị, mana ugbu a, nku anya ụgha na -eleba anya na ịdị irè, dabara adaba maka ụdị anya ndị mmadụ, mana ọ nwekwara ike ime ka anya yie nnukwu ma maa mma.
Nke gara aga: Ndenye aha nzuzo nke 100% Onye na -ere nku anya 3D ejiri aka mee nke ejiri aka mee
Osote: Mepụta nkeonwe Label lashes N'ogbe ugha nku anya mink
Nku anya 3d mink
Onye na -ere 3k mink lashes
kee lashes nke gị
nku anya N'ogbe
mink nku anya ndị na -ere ahịa
nku anya nkeonwe
mink lashes, eyeliner, Ndị na -ere ntutu anya, Anya anya, egbugbere ọnụ, Mgbatị ntutu anya,